Alexis Sanchez oo digniin khadka dhaxa ah u diray Kooxda Manchester United – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeSportsAlexis Sanchez oo digniin khadka dhaxa ah u diray Kooxda Manchester United
Hiiraan Xog, Alexis Sanchez waxa uu isha ku hayaa in Jose Mourinho dheeli doono kubad qurux badan maadama uu hadda haysto khad dhexe oo ay ka mid yihiin Fred iyo Ander Herrera.
Kooxda United oo hore loogu edeyn jiray kubaddeeda caga jiidka ah, adag ayuu Sancehz qishay in uu jeclaan lahaa mid taas ka xirfadeysan kana qurux badan dheelaan.
Mourinho waxa uu la saxiixday Fred isaga oo ku rejo weyn in uu bedelo qaab ciyaareedkaas waxaana Sanchez qanciyey Pereira oo ka soo laabtay amaah.
“Runta waxa weeyey Fred aad ayuu kulankii kowaad ii cajab galiyey,” ayuu Sanchez u sheegay ESPN Brazil. Waa waxa kooxda ka maqnaa – qof ciyaaraha ‘Jogo bonito ‘Kubad qurux badan, sida ay Brazil ugu yeeraan.
Sidaas oo kale waxaa ah Andreas Pereira.
“Waxaan qabaa in ay yihiin laba laacib oo tayo wanaagsan leh oo aad ii caawin kara.”
Jose Mourinho waxaa aad uga go’an ol’olahan in ay horyalka ka fara maroojiyaan Manchester City.
Kulanka kowaad caawa ay la dheeli doonaan Leicester City.